Zim inflation rises in June - Capital Business
Zim inflation rises in June
HARARE, Jul 20 – Prices in Zimbabwe rose in June, ending four months of deflation that followed the scrapping of the local currency, the government said Monday.
After a decade of hyperinflation that soared into multiples of billions, Zimbabwe\_’s government abandoned its currency in January.
Since trading in foreign currency was allowed, Zimbabwe\_’s once-deserted shops are again fully stocked with food.
Once a regional breadbasket, Zimbabwe\_’s economy has shrunk more than 40 percent over the past three years.
Last week Finance Minister Tendai Biti predicted that the country\_’s economy will grow by 3.7 percent this year and ruled out a return of the Zimbabwe dollar.